Iingcali zithi ukongeza ukubonelela ngokukhuselekileyo okusebenzayo, ukugqoka imaski kufuneka kuthathele ingqalelo ukuthuthuzeleka kwalowo uyinxibileyo, kungazisi iingozi zemvelo kunye nezinye iziphumo ezibi. Ngokubanzi, okuphezulu kokusebenza kokukhuselwa kwemaski, kokukhona kunempembelelo ekusebenzeni kokuthuthuzela. Xa abantu baphefumlela ngaphakathi, banxiba imaski echasa ukuhamba komoya. Xa ukhuthazo lokuxhathisa lukhulu kakhulu, abanye abantu banokuziva benesingqala, isifuba siyathobeka silinde imeko engonwabisiyo.
Umzi-mveliso wabantu abahlukeneyo wahlukile, umgaqo-siseko wahlukile, imfuneko yesalathiso esifana nokufumana umoya, ukhuseleko, intuthuzelo, ukulungelelaniswa kwimaski kwahlukile. Amanye amaqela akhethekileyo, njengabantwana, abantu abadala, abantu abaphethwe zizifo zokuphefumla kunye nentliziyo, ukukhetha ngononophelo uhlobo lweemaski, kwindawo yokuqinisekisa ukhuseleko, ukuphepha ukubamba isiyezi kunye nezinye iimeko ezingalindelekanga.
Okokugqibela, yenza ukuba wonke umntu angakhathaleki ukuba uluhlobo luni lwemaski, emva kokusetyenziswa kufuneka isingathwe ngokufanelekileyo, ukuze kungabi ngumthombo wosulelo olutsha. Ngokwesiqhelo ngaphezu kweemaski ezimbalwa, ukutshintshwa kwexesha, ukwakha ukhuseleko lwezempilo lomgca wokuqala wokuzikhusela. Ndikunqwenelela impilo entle!